Shiinaha 8000mm Length ID200mm Od204mm Soosaarka Tube Fiber Kaarboon Kaarboon & Warshad | Yan Tuo
Soo bandhigida faahfaahinta alaabta
Ujeeddada ugu weyn ee kaarboon-kaarboonku waa in lagu daro maadada, birta, dhoobada iyo kaarboon ahaan maaddo xoojinaysa si loo sameeyo agab isku-dhafan oo casri ah. Waxyaabaha isku dhafan ee epoxy fiber-ka ee la xoojiyay ayaa leh awoodda ugu sareysa iyo habka gaarka ah ee qalabka injineernimada hadda jira. Kaarboonka fiber-ka heerkulka sare ayaa iska caabiya marka ugu horreysa dhammaan fiilooyinka kiimikada.
Tuubbooyinka fiilada kaarboonku waxay leeyihiin adeegsiyo kala duwan, waxaana laga samayn karaa dogobyada qalfoofka diyaaradda, fallaadho fallaadho, qaybaha qaabdhismeedka tartanka, kalluumeysiga kalluumeysiga, gacmaha robotka, fallaadhihii gudbinta, iwm.
Waxaan ku siin doonaa taageero farsamo xirfadeed inta hawsha socoto, oo ay ku jiraan taxaddarrada isticmaalka, arrimaha amniga, rakibidda iyo tilmaamaha isticmaalka. Iyo inaad masuuliyad buuxda iska saarto dhibaatooyinka sheyga laftiisa.
Hore: kaarboonka fiilada telescopic-ka ee tiirka daaqada
Xiga: Tuuboyinka kaarboon kaarboon si loo qurxiyo